KGB sy ny manao firaisana | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in fahefana . karma dia . teraka . mponina . fifohazana . Zava-poana . zava-misy
Ao amin'ny firenena kely izay misy mponina, matetika, ny 20 an-tapitrisany, manana sata manokana fanompoana miafina. Noho izy ireo hiatrika tsy misy mahalala, ons majika, tsy mampino, ary saro-takarina foana tsimatimanota. Feno fitaka ny tsimatimanota mahavelona sy diso endrika heloka bevava. Ny mpanompo ho azy ireo dia tsy antony mampanahy, ary tsara loharanom-bola, izay “ireo voninkazo sy ny fofona” na dia amin'ny fotoan-maneran-demokrasia. Ny tena zava-mahagaga, fa ny fanandevozan'ny ny fomba fiasa Tsy voafetra ny isan'ny mponina.
Ao amin'ny tany toy izany, “tolotra manokana demonia” adalan'ny iray hevitra: “planed” firenena “olitra”. To hery an'ny ankamaroan'ny ny villains, mifandray amin'ny alalan'ny ra, “miafina demonia” Miezaka izy ireo mba mihazakazaka ny fanjary tsaika ao anatin'ny maro “vehivavy”. Mba hanaovana izany, dia, na dia, handrindra fanolanana ao an-tokantrano, miasa vondrona lehibe. Mandritra izany fotoana izany ny fandikana ny lalàna amin'ny fanasaziana amin'ny “fikambanan-jiolahy”. Manonofy ny fiaraha-monina, izay tany amin'ny tany rehetra ny ankizy, nanolana ny vavy, “ratsy ny demonia” Ampiasao ny misy fepetra fisorohana sy mitempo ao amin'ny indray. Ary tsy am-pihambahambana ny toe-javatra dia mety nampahatezitra, izay mpanakanto (polisy, sns. manam-pahefana mpampihatra lalàna) avy hamely ny olom-pirenena tsotra. Rehefa dinihina tokoa,, Mpanompo mitam-piadiana dia tsy mahazo miresaka momba baiko, ary rava ny olom-pirenena tsy afaka hiaritra intsony ny fahafaham-baraka.
Raha mihazakazaka avo firehetam-po – dia afaka miala ny raharaham-barotra. Rehefa dinihina tokoa,, vehivavy “mahomby mifikitra amin'ny biznesyukam”. Iza ireo, izay nangalatra roa tie-panjakana. Amin'ny zava-miafina izany dia tsy hiandry ny firenena, ary hanatsara ny “raharaham-barotra”. Number voaroba sy ambakaina mitombo astronomically, toy ny fanjakana “nanan-karena”. Fa ny fanjakana sy ny hetra rafitra misy afa-tsy ny malemy loha adala. Ary raha adala “hodorana amin'ny afo” na “hovitra tao amin'ny maizina” – “rafitra” fiainana, ary “raharaham-barotra” mahazo karena.
Ao amin'ny firenena miaraka amin'ny hafa karazana mpandraharaha mahomby dia tsy ara-dalàna degenerated vahiny fanahy, izay tsy manaraka ny tsingerin'ny feno ny asa ilaina ho fampiharana, ary teraka tamin'ny vonona-nanao fomba ny fitondran-tena ilainy mba hisambotra ny hery sy ny fandringanana ny fiainana.
be herim-po ry zalahy, fa, matetika, ruchkayutsya amin'ny “bravыmy Mpanjaka” alohan'ny “nanosotra”, hanadio ny tanana rehetra misy saha ny asa. Ary ny fifaninanana izy ireo manokana. Villainy heverina in ireo faribolana “ny fahafahana hiaina”, ary ny tena maharikoriko no sahaza indrindra ny olona ho amin'ny fiainana.
Rehefa misy olona mila azy “hanakopahan'Andriamanitra ny” handahatra ireo fanazavana ilaina fifandirana, satria mieritreritra, fa “teraka ny fifandirana marina”. na dia, na inona na inona, pihetseham-po afa-tsy ny fipoahan'ny fahatezerana sy ny halatra olon-kafa ny vaovao nandritra ny fihantsiana toy izany, tsy mitranga. Momba izy ireo ihany no mila, mba hahazoana vaovao, fidirana amin'ny izay voafetra, na azo atao. araka ny teknolojia, antsamotady fotaka Amin'ny mpanohitra, Mila ho fialan-tsiny mba hanome fanazavana ilaina, izay matetika ampiasaina ho amin'ny fampandrosoana ny fitaovam-piadiana vaovao.
Pairing amin'ny scoundrels, “faikany” avy ao amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovam na manaranaka “faikany” Tsy heverina ho toy ny mariky ny fahamendrehana sy ny “godsend”, izay tsy milatsaka tsirairay ary tena zara raha. Rehefa dinihina tokoa, ny “majika sarotra aleha” ihany no mendrika indrindra “tsy mampino fanitarana concentrates”, izay afaka manome be dia be “manaranaka humus”. Ny tena zava-mahagaga, fa ireo, izay nahavita haka endrika tsaratsara kokoa, faly sy sambatra ireo rehetra ireo toe-javatra mifanohitra, anefa, dia velona izany. Zeta Zeta tena faly. “ambony biby”, manao firaisana ao anatin'ny ny azy subspecies, miezaka handratra subspecies hafa. Amin'ity tranga ity,, mahalala ny fandrika sy ny fitaka isan-karazany, mandika ny fitsipiky ny fahaterahana indray, snatching amin'ny tena tsara kokoa mihitsy ary mamy anjara, tsy misy na inona na inona momba ny. Fanazavana toy izany dia tokony hanaiky izay virosy “Pitsaboana fitsaboana mahazatra”, izay tokony ho anjara toy ny mitondra sy ny aretina.
“Special ratsy ny demonia” nampahatezitra ny zavatra tsara ao amin'ny fandikan-dalàna, hitondra azy ho fankahalana sy hanitrika ao amin'ny ambany peo, noho ny fanampian'ny misy fitaovana, mampiray azy ireo tsiny noho ny fahotana sy ny heloka bevava. Avy eo dia mety milaza: “Toy izany koa ianao bipedal fikalnoe fifantenana rehefa!” dia toy izany no, nanorim-ponenana tao amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovam, mamorona “ny tsara fanahy”.
“Satana-tampon'ny Worlds” invents tsy miankina iray tsy misy mihitsy Andriamanitra, soa ihany fa ny azy ireo. Ary raha ianao no Andriamanitra – tsy maintsy hanaovana fahagagana, fa Satanists mamaritra ny boky. raha tsy izany – poyschut faharoa. Izany rehetra izany no tohanan'ny vahoaka ny very saina “jiolahim-boto”, izay mitaky fa manatanteraka ny faniriany, Ary raha tsy te-hanao – Izany dia midika hoe sandoka.
Ny tanora amin'ny fomba maty paika Hama zombotuhoy. Zombie dia mijanona raha tsy aorian'ny, no nanomboka “sputter tsara”. Famahanana ny ankizy mba ho tena afa-po ny ray aman-dreny-ny endrika sy ny fiankinan-doha amin'ny sakafo, izay miraiki-po amin'ny teny mafy ny “ny sakafo karakaraina”. Research ho fomba hafa hery dia nijanona hatramin'ny famonoana, ary ny vokatry ny fikarohana ho fantatry fikambanana miafina, izay mifehy adala farany.
adaladala nandia “olona” Izy tia ny hitsidika toerana be olona, izay niova fo ho “mandihy hamsters”. “lahy”, matetika, mitondra ny “vehivavy” ny paddock, izay miezaka ny hanao safidy ho an'ny tenany amin'ny hafa “lahy”, izay maneho vondrona mpanafika “tombontsoa” miaraka. raha “vehivavy” miparitaka in “tontolo iainana” pihetseham-po sy ara-panambadiana fampanantenana ny maro – “tombontsoa hamsters” taratra valinteny naneho hevitra “lahy”. Noho izany razrostaetsya batery fiarovana, dia fivavahana amin'i Satana. Ary maro ny “vehivavy” manafina fotsiny ao amin'ny metatra, fa efa tsy hita. Na dia eo aza ny fanjifàna miely patrana ny Cosmic hery, “hamsters” maintsy misoroka ny asa fikarohana. Avy amin'ny inona no antony zava-poana ny vatany mazàna ny Infinity, sy vatana no atao tsy ilaina. Ao amin'io tandindona sazy sesitany rehetra, izay nandà ny “maintsy mpanamory fandaharana”. Na dia izany aza, angamba, ny fitondran-tena dia noho ny zava-misy, fa “ambony biby” karazana ity vadiny amin'ny bulging ao anaty fotaka “ambony kisoa, chervyami, olitra, kalalao sy bibikely”, satria toa manintona toy ny.
fatra-paniry laza mpampianatra, nekena ny tolotra security, raha tokony ho, mba hanatanteraka ny asa avy hatrany, Kokoa izy ireo handrava ny mety tsaina ireo paroasy, ny mety izay mihoatra ny fampianarana hevitra tamin'ny 100-900 arivo. Noho ny fampianarana amin'ity tontolo ity isporozhnyaetsya “mainty efamira”. Raha atidoha fandidiana faty ny haavon'ny ny mainty dia voalahatra nahomby – -javatra “ny vatana” miezaka ny hanary ny efa ampiasaina, mba tsy mety ny endriky ny fahazavana ara-panahy amin'ny ho avy. ny “mamirapiratra atidoha” nedoprepodavateli miezaka mampiray ny fahasahiranana rehetra sy ny zava-manahirana, dia toy izany no notaterina, ny fiainany lasa mora kokoa kely vetivety dia feno fahatsapana ambony. na dia, raha tsy misy mpianatra marani-tsaina dia tsy misy ifandraisany amin'ny zava-manahirana ny fampianarana – izany ihany “Ny karma dia nandraraka hafa” tsy misy fampitandremana, satria tsy misy olon-kafa no haharesy azy tokoa. Amin'ny ampahany, izany no atao mba, hamorona mpianatra, Mety ho lasa lehibe izay mpifaninana, tsy fitiavany maizina ny siansa sy ny lalàn'ny natiora. Toy izany ireo mpampianatra tsy mendrika sazy ny fandroahana farany.
dia toy izany no, in “Satana tontolo” zava-dehibe ihany no rafitra ara-bola Satana sy ny andrim-panjakana. Ny zava-dehibe dia, ohatrinona matavy ao amin'ny kitapom-batsy, ary ny fomba haingana onitra noho ny hateviny, ary na ny mpanao gazety firy cubes na ny rantsantongony-avy no pumped sandrin'ny. Raha kely indrindra dia manana ny lanjany ny fahaizana ara-tsaina, fa ny fironana ho amin'ny fivavia- obfuscation hanao fanabeazana fototra. Tena zava-dehibe ny manana faniriana ny ho lasa olon-dehibe tanora, haingana hanitrika ny tenany amin'ny fahalotoana isan-karazany.
lehibe indrindra “fieken-keloka” mety ankizy tolotra manokana. Mamorona ny vondrona manokana dia efa ho avy ny fandrian-jaza dia efa miezaka “dia nanapaka” ny namany, ilaina hakana vaovao, izay afaka hiteraka tombony sy ny toerana eo amin'ny fiaraha-monina matoky ny fahafahana mifehy azy. Tsy toy ny ankizy ara-dalàna, izy ireo, ary koa ny olon-dehibe ray aman-dreny, na oviana na oviana “milalao” ny marina. Miezaka ny fahazazana “tarihiny ao anaty fotaka” ny zava-drehetra sy ny tsara indrindra sy tsara indrindra, izay mety hahatratra hatramin'ny. Tsy voailika, ary mety ho ara-dalàna ihany koa ny olona.
Mandevona tsingerin'ny ny asa tena lehibe ny tenany ilaina Cosmic Angovo, “flaky moka” ary “prolupivshiesya nits” nitady hanamarina ny fanaraha-maso ny sehatry ny angovo, mba hiarovana ny loharanom-baovao fidiram-bola azy manokana. Na dia ny, fa noho ny hery io dia ny fametrahana ny fiainana rehetra tsingerina, Izany dia ahitana ny tsy fahafaham-po ny filàna voajanahary ny taova (fahitana, mihetsika, Tantra, saturation, kivy be izy indraindray, etc ..), fa mifandray ihany koa ny mety hisian'ny hetsika mahatonga ny fiainana, isan-karazany ny hery izay manome Infinite Space (herinaratra, afo, andriamby tafika), Sy ny maha-Andriamanitra ny fisian'ny tsy manam-petra Izao Rehetra Izao, kanefa, tsy fantatra. angamba, noho ny zava-misy, fa “moron” dia afaka manaiky afa-tsy ny, izay mikapoka azy “ryahu”. ary, mba hanamarinana ny toerana sy hiditra ny tsotra loatra fifanjevoana, izy ireo fanao manala fahitalavitra sy ny omby rehetra, fa mitady mpiray tsikombakomba “satanynskomu tsena”. tena, mendrika ny asa atao ankehitriny “Fika”. Jereo ny tenanao ao amin'ny fitaratra – izany dia taratry ny fahamarinana.
Fa ny malambolambo tsininy fiasan'ny rafitra voalamina Satanists mahita azy, ny harena sy ny hery latsaka eo an-tanan'ny adala tsara-maso. Ny dingana lo no mameno romanticism fototarazo fironana “satanynskyh vehivavy” ny Vadinao! misy “fahatomombanan'ny” fa tsy ara-dalàna, izay azo zohina ny fahiny (satria ny an'i Azazela, ohatra).
Ny tsininy rafitra Niroborobo rafitra ka nijery voajanahary, ny mpikarakara sy ny curators niafina tany “sela avy amin'ny toe-javatra tsy azo”, tratrarina tsy noho ny inona fa “rafitra andevo”.
Noho ny asa sarotra ny voalaza teo aloha tsininy rafitra manodidina izao tontolo izao dia revo amin'ny fotoana nilany azy, izay Mampitombo ny uselessness sy fahadisoam-panantenana. Noho ny toetry ny fahavoazana maneran mihantona ny tonga volana, ny initiators sy vita fanoloran-tena mpanakanto voaheloka “mahazatra tany an-tsesitany”. Izany dia ny hiatrika azy ireo.
Izany dia famadihana, izay miteraka ao amin'ny haizina “Brown” sombina. Vovoka tsy handravaka ny haizina.
Vonona ve ianao “zdohnut” Board ny, ny zanakao foana nonina tao fanandevozana?
Raha mamitsaka “ratsy” – Izany dia midika hoe na ianao handrava azy ny tenako, raha tsy izany dia ho ringana aminao, fa, Azo inoana fa, dia handringana anareo.
Mahamay ny tany eo ambanin'ny tongony, ary “nandrora ny lanitra tendrombohitra” – tsara voalohany ka hatramin'ny-tenin'ny Tontolo Vaovao! ((( )))
• ● ⊡ ☆ Oliver Shanti – Avo dia ambony ☆ ⊡ ● •
Febroary 2013 ny taona ao amin'ny kalandrie gregorianina.